စက်ခေါင်း | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
Mersin တွင်ဖြတ်တောက်သောစက်ခေါင်းခိုးယူခံရ ရဲကသူ့ကိုချက်ချင်းဖမ်းဆီးလိုက်တယ်။ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရတစ်ဦးနိုင်ငံသားတို့ကတူရကီပြည်နယ်မီးရထား (TCDD) ၏သမ္မတနိုင်ငံဟာခေါငျးနုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျက်သိမ်းဝယ်, [ပို ... ]
ပို့ဆောင်ရေးအရာရှိချုပ်-Sen ၏စက်လုပ်သမားကို ပို. အရေးကြီးသောမကျေနပ်မှုသည့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူဖြေရှင်းခဲ့သည်။ က Izmir Halkapınar (Halkapınar Tank - Balikesir, အစ္စတန်ဘူလ်, အစ္စတန်ဘူလ်) မှလူသိများသည်အဖြစ်ကြောင့်ယာဉ်ကြောသိပ်သည်းမှုမှအချိန်ကြာမြင့်စွာနှင့် [ပို ... ]
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Erol Arıkan ve TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı başkanlığında heyet, araç filosunun modernizasyonu programı kapsamında TÜLOMSAŞ’ta bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, 2020-2022 döneminde çeşitli tiplerdeki dizel [ပို ... ]
Vossloh, အ CRRC စက်ခေါင်း Company ၏ရောင်းချအပိုင်း
စက်ရုံ၏ Vossloh စက်ခေါင်း Kiel အတွက် operating မတ်လ 2018 ကုမ္ပဏီများခုနှစ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ Vossloh စက်ခေါင်း၏ရှိသမျှနှင့်အတူထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည့်စက်ရုံမှာထုတ်လုပ်အသေးစားနှင့်အလတ်စားမော်တော်ယာဉ်များအပါအဝင်ဤအလေ့ကျင့်မှုလုပ်တာလဲ, [ပို ... ]
30 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 0
မေလအတွက်Balıkesirအဆိုပါရထားဘူတာကနေပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတိတ်တဆိတ် Manisa မြူနီစီပယ်ယူနွတ် Emre ငှားရမ်းထားသောတို့နှင့်ကြီးသောတုံ့ပြန်မှုဖြစ်စေတဲ့အနက်ရောင်ရေနွေးငွေ့ရထားနောက်တဖန် Balikesir နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ Balikesir ယူနွတ် Emre အတွက်မြေယာရထား [ပို ... ]
28 / 08 / 2019 Levent Ozen 0
ပထမအကြိမ်တူရကီရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်း KARAKURT:4Xပြီ 1957 nပြီ5တွင်Aprilပြီရှီဟီရီ (ရူကူရီရူ) ရှိဘိလပ်မြေစက်ရုံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင်တက်ရောက်ခဲ့သော Mr. Adnan MENDERES သည်နိုင်ငံတော်မီးရထားကိုဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Black ကရထားBalıkesir Returns
Manisa မြူနီစီပယ်ယူနွတ် Emre ၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအဆိုပါငှားရမ်းရေနွေးငွေ့ခေါငျး Balikesir ပြန်လည်ရောက်ရှိ။ ခဏတစ်လွန်ခဲ့တဲ့ AK ပါတီ Balikesir လက်ထောက်မင်္ဂလာ Aydemir, တပြည်လုံးကိုရထား Manisa အားပေးပြီးမှမိမိအကြေညာချက်, Balıkesirနှင့်အတူ [ပို ... ]
TÜLOMSAŞမှာတွေ့ရှိကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်သော TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာ,
TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan, TULOMSAS စက်ရုံမှာတွေ့ရတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေသငျ့လျြော။ အမျိုးသားရေးအင်ဂျင်နဲ့လုပ်တဲ့စက်ခေါင်းထုတ်လုပ်မှု TCDD အထွေထွေဒါရိုက်တာအလီ Ihsan သင့်လျော်သောများ၏စာမေးပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးထိုဒေသတွင်အနေဖြင့်ကန်ထရိုက်တာမှ General Manager Hayri Avci [ပို ... ]
ဧဝံဂေလိတရားကိုမှBalıkesir! .. ရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်း Returns
23 / 05 / 2019 Levent Elmastaş 0
TCDD Genel Müdürlüğü’nün Manisa’nın Yunusemre Belediyesi’ne kiraladığı buharlı lokomotif Balıkesir’e iade edilecek. TCDD Genel Müdürlüğü ile Yunusemre Belediyesi arasında imzalanan protokol ile2bin 557 lira artı KDV karşılığında bir [ပို ... ]
CHP ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့: 'စည်ပင်သာယာငွေချေးငှားအနက်ရောင်ရထားအလုပ်လုပ်ဘယ်အရာကိုအတူရှိတယ်?'
Ahmet Akın, “Ortada borçlu bir belediye var. Belediye TCDD ile protokol imzalıyor ve2bin 557 lira artı KDV’ye bu lokomotifi bir yıllığına kiralıyor. Akla mantığa sığmıyor! Neden kiralanır? Amaç [ပို ... ]
Balikesir, Manisa သမိုင်းဝင်မြေရထားကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်
Balıkesir Gar havzasında sergilenen nostaljik olarak sergilenen kara tren TCCD Genel Müdürlüğü tarafından Manisa’ya gönderildi. 1960’lı yıllarda Balıkesir’e hizmet veren ve teknoloji ile mücadelesini kaybetmesi sonrası yaklaşık 20 yıldır Balıkesir [ပို ... ]
တစ်ဦးက Millionaire Be ရန်လိုအဘယ်သူသည်ပထမဦးစွာအိမ်တွင်းရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းမှာမေးမြန်းရာတွင်
အဘယ်သူသည်တစ်ဦးက Millionaire လေို? သူ yadda ဂုဏ်ယူစွာအဆိုပါပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသားရေးထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်တူရကီ railwaymen သတိပေး, မေးခွန်းများကိုမေး၏။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေနွေးငွေ့ခေါငျးထဲမှာရွှေစာလုံး၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရထားလမ်းသမိုင်း၏ဇာတ်လမ်း, [ပို ... ]
ယနေ့သမိုင်းတွင် - 18 နိုဝင်ဘာ 1936 alaatalağzı-Filyos လိုင်း